Soodejiso bilaash waraaqaha gidaarka ee MacBook Pro 2018 | Waxaan ka socdaa mac
Soodejiso bilaashka waraaqaha sawirada ee cusub ee 'MacBook Pro' 2018
Haddii ay jiraan wax tilmaamaya bilaabista OS-ga cusub ama aaladaha cusub ee Apple, waa waraaqaha gidaarrada ama wallpapers. Xaaladdan oo kale ayaannu haynaa cusub 13-inch iyo 15-inch MacBook Pros marka waxaan heysanaa waraaqo duub ah oo cusub oo iyagu ma yara, kiiskan waa 6 nooc oo cusub.
Kuwani runtii waa waraaqo-dhaqameed wanaagsan oo noocyo kala duwan ah oo loogu talagalay kooxaha cusub. Sidoo kale, sida had iyo jeer aan uga imaado Mac, waxa aan isku dayeyno waa in lacagtani ay leeyihiin xalka ugu sarreeya ee suurtogalka ah si dhammaan adeegsadayaasha moodooyinka kala duwan ee Mac iyaga ku raaxaysan karaan inkastoo ay leeyihiin iMac 5k.
Dhammaan waraaqaha waraaqaha ee Mac-gaaga ku jira tayo 5k ah
Waxa ugufiican dhamaantood, iyagu runti waa asal quruxsan oo isticmaaleyaal badan ayaa horeyba ugu riyaaqay iyaga Macs. Sida iska cad muhiim maahan in la helo Mac si ay u awoodaan adeegsiga lacagtaan shaashadda, si isticmaale kasta oo doonaya uu ugu raaxeysto shaashadooda. Waxay ku saabsan tahay lacag cusub oo inta kale ee Macs aysan heli karin iyo in Apple hubaal ay ku dhammaan doonto ku darista daahfurka macOS Mojave bisha Sebtember ee soo socota, oo lagu dejinayo OS-ka Apple.
Marka waxaan kaaga tagi doonaa 6da wallpapers cusub ee 5k qaraarka ah ee aan saamileyda Mark Kliewer ee Mediafire. Si aad u soo dejiso waraaqahaas cusub waad isticmaali kartaa xiriiriyahan ama tan loogu talagalay si toos ah uga soo gal DropBox.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Soodejiso bilaashka waraaqaha sawirada ee cusub ee 'MacBook Pro' 2018
Apple waxay taageertaa balaarinta Sanduuqa Malala ee Latin America
LG Ultrafine 4k iyo 5k kormeerayaashu waxay ku habboon yihiin tikniyoolajiyada 'True Tone' ee MacBook Pro 2018